BSF maggots namafuta emichindwe yemafuta echikafu chekudya • Yurie BSF
Yurie | 5 Sea, 2019 | Nzira yePearl Catfish | 0 mashoko
Chii chinonzi BSF Maggot nePalm Oil Wastefishfish Feed?
Maggot / maggots BSF inonzi maggot yakazosvika pachikamu chikuru, chinobva mazai uye larva mauto makuru madutu/ muto mutsvuku anobhururuka. Maggot BSF zvinoshandiswa zvakanyanya semafungiro ezvimwe zvinoshandiswa uye zvakakanganiswa / zvekugadzirira zvipfuwo, kunyanya kudya kwekuku, kudya kwehove, nekudyisa shiri, nekuda kweproteiniti yakawanda uye chikafu chekudya. Kunyange zvazvo mashizha emafuta emuchindwe ndiwo mafuta emichindwe emafuta emucheka anotangira kubva kune mamwe ose ekugadzirwa kwemafuta emuchindwe kuva mafuta ekubika, nezvimwe zvakadaro. Izvi zvinoshandiswa kubva kumafuta emuchindwe zvinogona kushandiswa sekudya kwezvipfuwo pamwe chete, nokuti zvigadzirwa zvehutano zvakanaka chaizvo. Pasi apa ichakurukurwa pamusoro peSBF maggot, mafuta omuti wemichindwe, uye nzira yekudyisa makungwa uye kuita catfish zvokudya zvakanaka.
Chii chinonzi BSF Maggot?
Maggot / BSF maggot is maggot yakazosvika pachikamu chevanhu vakuru, chinobva mazai nemaruva evanhu vemauto / muto mutsvuku anobhururuka. Iyi hondo yakasviba inobhururuka ndeyemhando yemhepo inobhururuka nokuti inongopedza kudya kwenyama. BSF mapurova ane mano ekugadzirisa mabhakitiriya akaipa akawanikwa mumarara. Iyi jobvu inowanzonziwo hermatia illucens nekuda kwekukwanisa kwayo kubudisa ma-enzymes emu cellulose.
Parizvino BSF Maggot yakave yakakurumbira zvikuru nekuda kwehutano hwakanaka uye mapuroteni ane zvipfuwo, uyewo zvingave zvebhizimisi maggotti BSF iyo pachayo ine simba rakanaka.
Nezvakawanda zvikomborero zvinowanikwa kubva kune nhunzi dzemauto mashomanana / BSF, munyaya ino mumarara kana maggot, maggot a BSF akanaka kwazvo kukura.
Zvikonzero zvekukura kweBigg Maggot
Nhunzi dzemauto masikati haisi yezvisikwa chete, asi mhuka dzisingambotori hupenyu hwadzo dzakachengetekawo kuvanhu
Zvisikwa zvakasununguka zvinokonzerwa nehupenyu zvakasara / kuparara
Nhamba uye huwandu hwevanhu zvinogona kudzorwa zvakasununguka
Nhamba ye mazai anosvika zviuru zve-per-tail BSF inobhururuka
BSF mabuva ndiwo ose anodya mhuka
Chido chikuru kuti zvikurumidze kukura nekukohwa nekukurumidza
Geza uye hauna kunhuwa kwekunhuwa
High yakakosha yemhuka yekudya
Kushandisa / kupedza zvishoma nzvimbo
Yakachena uye inogonazve kuwanikwa yemapuroteni emhuka
Yakakwirira mumakoriri uye mapuroteni
Inobatsira bhizimusi rinobatsira
Unogona kukura uye kuchinja kumamiriro ekunze muIndonesia
Kurairirwa kwevhidhiyo zviri nyore kuita
Bhuku re BSF rinowanikwa zviri nyore kunyange mupurazi
Chii chinonzi Kalapa Sawit pulp?
Mafuta emafuta echigorosi inzvimbo yakasara kana tsvina kubva mukugadzirwa kwemafuta emichindwe kusvika mune zvigadzirwa zvakagadzirwa. Uyu mafuta emichindwe marara haazokanganisa mamiriro ezvinhu akaipoteredza nokuti inenge yakasvibiswa, iyo isina mishonga inokuvadza. Munguva yakapfuura, mafuta emichindwe yemichindwe haana kushandiswa zvachose, asi nekufamba kwenguva masimbi emichindwe emuorivhi akatanga kuonekwa seakashandiswa maererano nemhuka neminda. Iri remafuta emichindwe rinoshandiswa nyore nyore nokuti rinenge riri mumarara emarara.
Kubatsira kweMafuta Palm Waste
Kuita organic fertilizer
Yakagadzirirwa sechinhu chisanganiswa chekugadzirwa kwehuniki yekurima uye minda.
Zvimwe mhuka dzinopa zvokudya zvinoshandiswa
Yakagadzirwa mune imwe nzira yekufudza zvipfuwo. Iva mhou, mbudzi, hove, nevamwe.
Inoshandiswa seimwe shanduko yemapepa emapepa
Mafuta epamusoro anogona kushandiswa sekusanganiswa kwekugadzira mamwe mafuta
Yakagadzirwa chisanganiswa cheimba yemumba
Mharidzo yekugadzirwa kwemaggot uye fungi
Iva mumwe wevhidhiyo kuti uuye ne BSF kana mushroom majeko
Ane mishonga yakakwirira
Iyo ivhu mushure mekukohwa ine mishonga yakakosha yehutano nekuda kwemigumisiro yekuora. Izvo zvine chikafu uye chikafu chemafuta emichindwe yemafuta ndeimwe yepamusoro-soro kana ichienzaniswa nedhakavha uye nezvimwe zvakadaro. Kubva pana Aritonang Pasaribu uye Utomo, iyi yemichindwe yemafuta inosvina ine mishonga inotevera:
Rough energy 3000-4230 kcal / kg
15-17% yakawandisa protein
Nhamba isina kufanira 9-26%
7-16% isina mafuta
Nzira yekuita Catfish Feed kubva kuMaggot BSF
Kuti udye chikafu chechikafu, unogona kupa maggot maruva zvakananga kune catfish zuva 15 zuva nepamusoro, asi kuti catfish yezera revanhu vakuru kana kuti 30 mazuva pamusoro pehuwandu hwehuwandu hwemhuka inofanira kuwedzerwa, saka yakagadzirwa pamwe chete. Hezvino nzira yekuita catfish-yakagadzirwa kudya:
5kg bran rakanaka
30 kg Upfu hweMaggot
30 kg kupisa soybean
Chikafu chegorosi 40 kg
BSF Upfu hwemaggot, upfu hwe soya, furawa yegorosi uye mbiriso yepepe inosanganiswa mu satau uye inogumburwa kusvikira yakanyatsogadzirwa.
Pinda mvura, uye gadzirai kusvikira yakanyorova
Dururirai musanganiswa mumudziyo
Rega kumira kwehafu yezuva / 12 maawa
Sveta hove dzakasvibiswa uye mashizha epapapaya kusvikira yakanyorova
Dhinda poda yakasara isina chinhu
Dry it pasi pezuva
Chengetedza mune mudziyo wakachengetedzwa
Nzira yekuita catfish kudya kubva pamapupa emichindwe
BSF kudya kwehove kana upfu hwemaggot
Mvura yakabikwa yakakwana
Nzira yekuita nayo ndeyekuvhenganisa zvose zvinoshandiswa mune imwe nhanho neshato kubva pane chekutanga, zvino wedzera mvura zvishoma nezvishoma, zvino sangana zvakanaka. Chimiro chakakomberedzwa chiduku saka chakaoma nehuwandu hwe60-70%.
Saka vazhinji vanoongorora nguva ino, zvingabatsira kune shamwari dzose.